ဘုရင်မင်းမြတ်သုံးပါးအားအာဂျင်တီးနားတွင်မည်သို့ကျင်းပသနည်း Absolut ခရီးသွားခြင်း
ဒံယလေက | | အာဂျင်တီးနား
ဇန်နဝါရီ ၆ သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံများစွာရှိကလေးများအတွက်မျှော်မှန်းထားသည့်နှစ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ The အာဂျင်တီးနားမှာသုံးဘုရင်ကနေ့ ၎င်းသည်မှော်နှင့်အထူးနေ့ရက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကြာရှည်စွာစောင့်မျှော်ခဲ့ရသောနေ့ဖြစ်သည် Melchior Caspar နှင့် Balthazar သူတို့သည်အိမ်၏အသေးငယ်ဆုံးလက်ဆောင်များကိုယူဆောင်လာကြသည်။
ဒါဟာဒီတိုင်းပြည်ထဲမှာထူးခြားတဲ့အစဉ်အလာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမှန်ပါတယ် လူသိများသည်မှာစိန့်မexplainedဲကျမ်းအရခရစ်ဝင်ကျမ်း၌ရှင်းပြထားသောသမိုင်းကိုအခြေခံသည့်ထုံးစံတစ်ခုဖြစ်သည် အရှေ့၏ Magi သူသည်ဗက်လင်ကြယ်၏ကြယ်နောက်တွင်ကလေးငယ်ယေရှုအားဂုဏ်ပြုရန်ခရီးထွက်ခဲ့သည်။ ရွှေ၊ လောဗန်၊ မုရန်စသောဘုရင်များယူဆောင်လာသည့်လက်ဆောင်များကိုယနေ့ခေတ်လက်ဆောင်များအစဉ်အလာကိုတုပရန်ကြိုးစားသည်။
ဒီနေ့ခေတ်ခရစ်ယာန်ကမ္ဘာမှာကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများဟာ။ ထို့အပြင်အဖြစ်လူသိများဇန်နဝါရီလ6ရက်, Epiphany Dayကဲ့သို့သောကက်သလစ်အစဉ်အလာ၏များစွာသောဥရောပနိုင်ငံများတွင်ပွဲလမ်းသဘင်ဖြစ်ပါတယ် သြစတြီးယား၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ စပိန်၊ ပိုလန်သို့မဟုတ်ဂျာမနီ။ ဂျာမန်များသည် Cologne ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၏ကြမ်းပြင်အောက်တွင်မြှုပ်နှံမည့်သူတို့၏နယ်မြေရှိ Kings ၃ ခု၏ရုပ်ကြွင်းများကိုလည်းသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။
သို့သော်၎င်းပွဲတော်သည်စပိန်နိုင်ငံတွင်ဖြစ်သည် Kings ၏ Cavalcades နှင့်ဂန္ Roscón။ အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ၏အခြားတစ်ဖက်သို့ဤပါတီကိုတင်ပို့သောစပိန်လူမျိုးများမှာအတိအကျဖြစ်သည်။ အမေရိကရှိ Puerto Rico၊ မက္ကဆီကို၊ ဗင်နီဇွဲလား၊ ကျူးဘား၊ ဥရုဂွေး၊ ပြီးတော့အာဂျင်တီးနားမှာပေါ့။
ယနေ့တွင် Santa Claus ၏ Anglo-Saxon အစဉ်အလာသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနေရာတိုင်းနီးပါးတွင်လွှမ်းမိုးထားသည်။ သို့သော်ဘုရင်များစွာ၏လက်ဆောင်များသည်အစဉ်အလာအတိုင်းဆက်လက်ရှိနေသောသို့မဟုတ်စဲန်တာကလော့စ်နှင့်အတူယှဉ်တွဲတည်ရှိနေသောနိုင်ငံများစွာရှိနေသေးသည်။
2 အာဂျင်တီးနားရှိ Kings ၃ ရက် - သကြားလုံးများနှင့်လက်ဆောင်များ
အာဂျင်တီးနားမှာရှိတဲ့ ၃ ဓမ္မရာဇဝင်အကြောင်းမပြောခင်မှာပင်မှော်အတတ်ဖြစ်သောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စောင့်ဆိုင်းမှုအကြောင်းပြောရမယ် ဘုရင်၏ည.
ကမ္ဘာ့အခြားနိုင်ငံများနည်းတူကလေးများသည်စာတစ်စောင်ရေးသည် ခရစ္စမတ်ဘိုးဘိုးကြီး ဆန္ဒစာရင်းပါသည့်အာဂျင်တီးနားကလေးများသည်အရှေ့ဘက်မှမာဂုပညာရှိများနှင့်အတူတူပင်စာပို့ခြင်း၊ စာတိုက်ပုံးတွင်ထည့်ခြင်းများပြုလုပ်ကြသည်။ "ရှင်ဘုရင်တို့အားပေးစာ"။ လက်ဆောင်များသည်ခရစ်စမတ်နေ့တွင်မဟုတ်ဘဲ၊ ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်မွန်းလွဲပိုင်းတွင်ရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အာဂျင်တီးနားရှိ Kings ၃ ရက် - သကြားလုံးများနှင့်လက်ဆောင်များ
ကလေးတစ် ဦး အတွက်နံနက်ခင်းထက် ပို၍ စိတ်လှုပ်ရှားစရာအချိန်မရှိပါ အာဂျင်တီးနားမှာသုံးဘုရင်ကနေ့! သူငယ်များသည်ကြာမြင့်စွာကတည်းကစောင့်မျှော်နေသောလက်ဆောင်များကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဖွင့်ရန်စောစောထကြသည်။ ဒါဟာပြီးသားလူသိများသည် တစ်နှစ်ပတ်လုံးအကောင်းဆုံးပြုမူသူများသည်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်များကိုရရှိသူများဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်စိတ်မပူပါနဲ့ - မာဂုပညာရှိတွေကဘယ်ကလေးကိုမှမမေ့ဘူး
Rosca de Reyes သည်အာဂျင်တီးနားရှိဘုရင်သုံးပါး၏ပွဲတော်ကိုအဆုံးသတ်စေသောခဲဖွယ်စားဖွယ်ဖြစ်သည်
ဇန်နဝါရီ ၆ သည်မိသားစုတစ်စုအနေဖြင့်အတူတကွစုဝေးပြီးပျော်စရာကောင်းသောဝန်းကျင်၌အစားအစာကိုပျော်မွေ့ရန်နေ့ဖြစ်သည်။ နေ့လည်စာစားပြီးသည့်နောက်အခြားအရသာရှိသောအစဉ်အလာကိုဖြည့်ဆည်းရန်အချိန်တန်ပြီဖြစ်သည် Rosca က de Reyes, ထိုအာဂျင်တီးနားကိတ်မုန့်နှင့်မုန့်ဆိုင်အားလုံးပါတီမှမတိုင်မီနေ့ရက်ကာလ၌ရောင်းချသော။ ဥပမာအားဖြင့်အာဂျင်တီးနားရှိ Kings of the Day သုံးချည်သည်မက္ကဆီကို (သို့) စပိန်တွင်စားသည်ထက်အနည်းငယ်သေးငယ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတိုင်းပြည်များတွင်ဓလေ့ထုံးတမ်းများအရအံ့အားသင့်ဖွယ်ရာများ (ဘုရင်၏ပဲများ၊ ပဲများသို့မဟုတ်ပုံများ) မပါ ၀ င်ပါ။
Rosca de Reyes ၏အာဂျင်တီးနားဗားရှင်းတွင်လက်စွပ်ပုံသဏ္ဌာန်ရှိပြီး pastry cream, candied သစ်သီးများနှင့်သကြားပုလဲများပါရှိသည်။ စိတ်ကူးမှာတော်ဝင်သရဖူ၏ပုံသဏ္ဌာန်ကိုတုပရန်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်တယ် ခရစ္စမတ်အားလပ်ရက်၏နောက်ဆုံးလုပ်ရပ်။ ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ပြန်ဖြစ်ရန်နှင့်သစ်ပင်ကိုဖြုတ်ပစ်ရန်နှင့်အိမ်၏အလင်းအိမ်နှင့်အလှဆင်ပစ္စည်းများပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိစေရန်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ချိုသာသောအဆုံးမှတ်ဖြစ်သည်။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ (Santa Claus ၏ပြိုင်ဆိုင်မှု) ကြားမှ ၃ ဓမ္မရာဇဝင်၏ဓလေ့ထုံးစံသည်ယင်း၏အရေးပါမှုကိုမဆုံးရှုံးစေဘဲဆက်လက်ပျော်မွေ့နေကြသောကလေးငယ်များအတွက်များစွာလျော့နည်းစေသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » ဘုရင်မင်းမြတ်သုံးပါးအားအာဂျင်တီးနားတွင်မည်သို့ကျင်းပသနည်း